Araka ny fanadihadiana nataon’ny Ong « Action Contre la Faim (ACF) », teto an-drenivohitra tokoa mantsy tamin’ny volana mey sy jona lasa teo dia 49,3% amin’ireo zaza latsaky ny dimy taona no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka, raha 48% manerana ny faritra Analamanga (MICS2018) ary ny 4,5% amin’ireo zaza ireo dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Anisan’ny tetikasa ara-tsosialin’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo, tamin’ny alalan’ny fanaovan-tsonia ilay fifanarahana antsoina hoe :« Pacte de Milan » tamin’ny taona 2017. Tanàn-dehibe 199 maneran-tany no mitovy fomba fijery nanao sonia ny fifanarahana, izay maneho fahavononana ara-politika amin’ny fananganana rafitra fiahiana ara-tsakafo maharitra ho an’ny tanàn-dehibe. Singa enina no heverina hapetraka mba handrosoana vahaolana azo tsapain-tanana amin’izany toy ny fitantanana ara-tsakafo, ny fanjarian-tsakafo maharitra, ny famokarana sakafo, ny famatsiana ny fitsinjarana, ny fampitoviana lenta ara-tsosialy sy ara-toekarena ary fampihenana ny fako azo avy amin’ny sakafo. Marihina fa anisan’ny tanàn-dehibe 03 maneran-tany mitarika ny fanatanterahana ny paikady famongorana ny tsy fanjarian-tsakafo voafaritra. Efa manana toeram-pambolena ao Antanimena isika, araka izany. Tafakatra 106 ny mpamboly any an-tokantrano, 11 ny tetikasa fiaraha-miasa niarahana tamin’ireo Ong sy fikambanana raha mahatratra 30 isa kosa ny Epp efa manana toeram-pambolena hanomezana tohana ny ankizy.